Pathak Bichar - Setopati | Setopati - Nepal's Digital Newspaper
To: राजीनामाले उज्यालियो दाहालको छवि
कल्पना भट्टराई - लोडसेडिङ अन्त्य, ओबरमा हस्ताक्षर, फास्ट ट्रयाक लगायतका राम्रा काम दाहाल नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको छ। तिनको सह्राना गर्न कन्जुस्याईं गर्न हुँदैन। मुख्य कुरा यदि दाहालको राजीनामाभित्र कुनै भित्री खेलहरु सम्मिलित छैनन् भने उहाँको यो कदम अत्यन्त प्रशंसनीय छ। साथै दाहालले आफ्नो कद उँचो गर्ने अवसर सहर्ष सदुपयोग गर्नुभएको छ। वचनमा ढुक्क बन्न नसकिने मानिस भनेर चिनिने उहाँको छवि उजिल्याएको छ।
डा. शैलेन्द्र सिग्देल - राजनितिमा भर्खर प्रवेश गरेकी रन्जुलाई मेयर पदमा निर्वाचित गराएर उनीलाई मार्गदर्शन गर्ने भूमिकामा तपाई रहनु भयो भने निश्चय नै नेपालको राजनैतिक इतिहासमा यो एउटा नयाँ प्रयोग हुनेछ। अरुले पनि यसबाट पाठ सिक्ने छन्। नयाँ पुस्तालाई राजनितिमा स्थान दिन यो कोशेढुंगा साबित हुनेछ। मलाई के पनि विश्वास छ भने वैकल्पिक राजनैतिक शक्ति खोजिरहेका काठमाण्डौबासीहरुले तपाईहरुलाई अवश्य विजय गराउने छन्।
इन्द्र थेगिम - रित्तो बोतल र खाली शिशाहरूले
रमाकान्त शर्मा - जनप्रतिनिधिहरुको अवधि समाप्त भएपछि कर्मचारीको शासन सुरु भयो। कर्मचारीको उद्देश्य र प्रवृत्ति भनेकै जागिर खाने र पैसा कमाउने हो। देशकै कर्मचारीको उच्च पदमा पुगेका व्यक्ति मुख्यसचिव जस्तो पद प्राप्त गरेको व्यक्ति त पद त भै हाल्यो पैसा पनि कमाउनु प¥यो भनेर विदेश हिँड्ने अवस्था छ भने त्यसभन्दा तलका कर्मचारीको हालत के होला? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। यसको मतलब सबै कर्मचारी पैसाकै लागि काम लाग्दछन् भन्ने होइन।
चन्द्र के.सी. - क्षमा गर्नुहोला, म कांग्रेसको सदस्य भएका कारण कांग्रेसको गर्विलो इतिहास र शक्तिशाली बर्तमानको विषयमा निश्चय पनि अनभिज्ञ छैन। सँगै देशको समृद्ध भविश्यको राजमार्ग आजको विद्यमान कांग्रेसको काम गर्ने सोच र शैलीले सुनिश्चित गर्न सक्दैन भन्ने कुरामा पनि अनभिज्ञ छैन। नेतृत्वका लक्ष्यहरु सधै आफू केन्द्रित मात्र छन्। सत्ता र शक्ति जोगाउन मात्र नेतृत्वको प्राथमिकताको विषय बन्छ। नेतृत्वसँग न इमान–जमान छ, न विधि र प्रकृया छ, न सपना र कल्पनाशिलता, न समस्याहरुको समाधान गर्नसक्ने कार्यकौशलता छ। त्यसैले महोदयहरु, मेरा अघि देश फेर्नका लागि भनेर कांग्रेस फेरिन्छ कि फेरिदैन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।
कृष्णप्रसाद शर्मा - नेपालमा हुने बन्द हड्तालका कार्यक्रममा धेरैजसो आगजनी र तोडफोडका कार्यक्रम सम्भवत: विप्लवले नै आयोजना गरेका बन्दमा हुने गर्छन्। त्यसमा पनि धेरै नोक्सानी मजदुर वर्गले नै खेप्नुपरेको देखिन्छ। चालकलाई ट्याक्सी भित्रै राखेर बाहिरबाट आगो लगाइएका घट्ना समेत हामीले यस्ता बन्द हड्तालमा देखिसकेका छौँ। ती घटनासम्म त मैले पनि केही लेखिनँ। माओवादी जनयुद्धको समयमा यस्ता आगजनीका घट्ना धेरै देखिएकाले पनि स्वभाविकै ठानियो।
सीता अर्याल - अझ श्रीमतीले वेड टी बनाएर लगेर बोलाउँदासम्म पनि उनिहरुलाई उठ्न गाह्रो हुन्छ। यस्तो लाग्छ की चिया पिईदिएर श्रीमतीमाथि उनिहरुले कुनै कृपा गरिरहेका छन्। एउटै समयमा अफिस जाने र घर फर्कने उनीहरु घरको कामको जिम्मा चाहिँ श्रीमतीको टाउकोमा मात्र थोपर्छन्।
उषा रश्मि पाण्डेय - विश्वको जुनसुक्कै
म जन्मिदाँ त थिए केवल मान...
- सरगम भट्टराई - म कसरी भनूँ मेरो देश चक्रै चक्रको कुचक्रमा फँसेको छ भनेर, म कसरी भनूँ मेरो देश केही मुठ्ठीभर मान्छेहरुको र दलदासहरुको चंगुलमा फँसेको छ भनेर, म कसरी भनूँ स्वार्थको राजनीतिको रापमा देश भत्भति पाकिरहेको छ भनेर ! कसरी भनूँ यहाँ राज्यका अंग अंगमा दलका दासहरुले योग्यता हैन चाकरीको भरमा नोकरी पाउँछन् भनेर ! त्यसैले जब जब अमेरिकीहरुले 'ह्वाई आर यु हियर' भन्छन् तब तब म त्यही नोष्टाल्जियामा हराउँछु । अनि आफैले उठाएको सवाललाई बिषयान्तर गर्छु ।
मनीषा अवस्थी - सञ्चारमाध्यमहरुले कहिले समाचारमा त कहिले बिज्ञापनमा पटक पटक यस्ता गल्ती दाहो¥याइरहन्छन् । जसका कारण लोकतान्त्रिक पद्दतिमा पुगेका नेपालीहरुको सही सुचना पाउने अधिकारमा असहजता पैदा भएको छ। यो सुचनजाकै हकमा पहिलो कुरा सञ्चारमाध्यमले स्रोत बिना प्रकाशन/प्रसारण गर्नु नै गल्ती हो। दोस्रो नेपालमा प्रयोग हुने नाङ्गा साबुनको गुणस्तरबारे बिज्ञापन प्रस्ताव आइसकेपछि ती उत्पादनको गुणस्तरबारे छलफल परामर्श तथा सम्बन्धित पक्षको ध्यान आकर्षण गराउनुपथ्र्यो जुन कुरा आम सञ्चारको दायित्वभित्र पथ्र्यो।
डा. रबिन खड्का - हेर हाम्रा नेताले, आफैंलाई भुइ-फुट्टा बनाए।
बिखन्डनको बाटो रोजी, न यता न उता बनाए ।
अनेकौ वाद तन्त्र भनी सधै जनता झुक्याइरहे,
विकासको नाम जपी, माछो-माछो भ्यागुता बनाए ।
देखावटी झगडा गर्ने, वर्षै पिच्छे सत्ता फेर्ने,
पालै-पालो लगाइ देश, ...
सुशीलकुमार साह - lsquo;ल् उठनुस तपाईहरु, आ–आफनो झोलाहरु चेकजाच गराउनुहोस्’,
केही दिन अगाडि आर्थिक राजधानीको रुपमा चिनिने शहर...
घनश्याम शर्मा - नेपालमा पनि विभिन्न विषयलाई लिएर विभिन्न समयमा आन्दोलन हुँदै आएका छन्। कुनै जायज माग होला कुनै जायज माग नहोला आफ्नो ठाँउमा छन्। आफ्नो हक अधिकारको लागि कुनै ठाँउमा भेला भएर शान्तिपूर्ण माग राख्न पाउनु मौलिक अधिकार हो। तर, आन्दोलनको नाममा अरुको हक आधिकारको ख्याल नगरी देशलाई आर्थिक व्यय पर्ने गरि उद्योग धन्दा शैक्षिक संस्था सवारी साधन ठप्प पारी गरिने आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुन सक्दैन, देशको हितमा हुन सक्दैन।
भक्तप्रसाद गैरे - यदि व्यापक विरोध भएमा उक्त प्रस्ताव आधिकारिक होइन भनिदिने अनि खासै विरोध भएन भने उक्त प्रस्ताव नै अक्षरस संसदमा पेश गर्ने सरकारी नियत नै हो। तर तत्कालका लागि उक्त प्रस्ताव अगाडि बढाउन सरकार नै हिचकिचाएको देखिन्छ। विश्वका धेरै देशमा आप्रवशन मुद्दा निकै पेचिलो बन्दै गएको छ। जसको ज्वलन्त उदाहरण कसैले नचिताएका डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकाका रास्ट्रपतिमा चुनिनु हो।
केशव प्रसाद पाण्डे - सियो ,र नुनदेखि चामल र सुनसम्म बाहिरबाट नल्याए चुलो तात्दैनन् यताका र पनि भारतलाई दोषी देखाएर उम्किने अवस्था अब होइन। त्यही मुद्दामा नेतृत्व लिएका सुप्रिमो 'प्रचण्ड' कसरी भारतीय चक्क घुम्ने बने आजकाल त्यहि हेर्नुस्, सुरुङ युद्वको औंचित्य! कुटनीतिले खेल्नुहोस्। हतियारले बिच्काँउन जानेर मात्रै पुग्दैन। बन्द गरेर होइन खुल्ला राखेरै आत्मनिर्भरताको देश बनाउनुस्।
राजकुमार पासवान - छठ मिथिलाञ्चलमा प्रमुख चाडका रुपमा मनाए पनि हाल मेचीदेखि महाकालीसम्म तथा राजधानी उपत्यकाका तीनै जिल्लासहित अधिकांस जिल्लामा मनाउन थालिएको छ । कतिपय ठाउँमा हिन्दु धर्मबाहेकका अन्य धर्माम्बलीहरु समेत यो पर्व मनाउन थालेका छन् । Comments
किशोरप्रसाद जोशी - नेपालमा सामन्तवादको अवशेषको रुपमा लिइएको १०४ वर्षिय राणा शासन, ३० वर्षको पञ्चायत र २४० वर्षिय राजतन्त्र शाही शासनको अन्त्य गरी दुनियाँ कै क्रान्तिकारी मानिने जनताबाट निर्वाचित संविधान सभाबाट संविधान बनाइयो। सर्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली संघियता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व संसदीय व्यवस्था सहितको संविधान निर्माण भयो। भौतिक रुपमा सामन्तवादी राजतन्त्रको दाहसंस्कार गरियो। जनताबाट निर्वाचित भएर जनप्रतिनिधी शासन सत्ता चलाइरहेका छन्।
उमा केसी - गाउँमा मेरो पनि सानो घर छ। परिवार छ। आफन्त छरछिमेक छन्। यी सबैको सम्झना मलाई पनि आउँछ। घर मास्तिर लटरम्म जुनार पाक्न थालेका छन्। बारीमा कोदो, फापर, तिल, गहत, मस्याङ झुलिरहेको छ। खेतमा धान लहलह भएको छ। यो सहर दसैंमा सुनसान हुँदा मेरो गाउँ राजधानीबाट गएका आफन्तले भरिएर रङ्गीचङ्गी भएर गुञ्जिएको छ। लिङ्गे पिङले सजिएको छ यतिबेला मेरो गाउँ।
बज्र बस्नेत - अहिले नेपाल सरकारले लामो दूरीमा चल्ने सबैखाले सवारी साधनमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु नराख्न तथा तोकिएको भन्दा बढी भाडा नलिन सम्बन्धितलाई कडा निर्देशन दिएको भन्ने समाचारहरु सुन्न र पढ्न पाइन्छ।
श्रेया पौडेल - प्रत्येक वर्ष नेपालबाट अत्यन्तै ठूलो संख्यामा नेपालीहरु विदेशिन्छन्। कसैको रहर हुन्छ भने कसैको बाध्यता। सायद अहिले घरको एउटा सदस्य पनि विदेश नगएको परिवार औंला भाचेरै गन्न सकिन्छ होला। सदस्य विदेशीएका परिवारको वेदना र पीडा सुन्दा सायद थोरैको आखाँबाट आँसु नझर्ला। Comments
- सरगम भट्टराई - म बिषय वस्तुमा प्रवेश गर्न चाहन्छु: तपाई प्रधानमन्त्री हुनुभयो र सपथ ग्रहणमा जानुभयो। ईश्वरका नाममा तपाईंले सपथ खानुभएन। ठिकै छ तपाईं भौतिकवादी नै हुनुहुँदो रहेछ।